मातृभाषा बोल्दा ‘हाँसोको पात्र’ बन्नुपर्ने कहिलेसम्म ? - Nepal's No.1 News portal
सञ्चार लाइभ प्रकाशित : February 11, 2021
-किन पाउदैनन् हाम्रो मातृभाषालाई मान्यता ? देवनागरी लिपिमा लेखिने ‘नेपाली भाषा’ कसरी लेखिन्छ ? कसरी लेखिनु पर्छ र कसरी लेखिनु हुँदैन ? भन्ने निर्णय टेबलमै बस्ने व्यक्तिहरूले गर्दछन् । त्यसरी कोरिएका नियमहरू शिक्षा प्रणालीमार्फत विद्यालय तहसम्म पढाइन्छ र कानूनमार्फत लागू पनिगरिन्छ ।
जसको घरमा यो भाषा मातृभाषा हो, उसको मष्तिस्कमा यो भाषाको जग सब्बल हुन्छ, उसले त्यस भाषाको सुक्षामान्तर बुझ्दछ र सो भाषाको सांस्कृतिक परिवेशसँग पनि भिज्दछ । तर गैर–मातृभाषा बोल्ने प्रति सम्मान गरौं ।by-sherpakhabar